Diyaarad siday ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan koox Kubada Cagta Ciyaarta oo ku soo dhacday meel Buuraley ah Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Diyaarad siday ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan koox Kubada Cagta Ciyaarta oo ku soo dhacday meel Buuraley ah Daawo Sawirro!!
Diyaarad siday ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan koox Kubada Cagta Ciyaarta oo ku soo dhacday meel Buuraley ah Daawo Sawirro!!
Nov 29, 2016WARAR
Diyaarad siday ku dhawaad 100 qof oo rakaab ah ay ku jiraan ciyaartoyda Koox kubada cagta ah oo ka dhisan dalka Barazil ayaa ku dhacday duleedka magaalada Medellin ee kutaala waqooyiga dalka Colombia.
Waxaa socda gurmad deg deg ah iyo baadi goob loogu jiro sidii loo heli lahaa dadkii saarnaa diyaaradan oo kusoo dhacday dhul buuraley ah, waxaana diyaaradan la sheegay in ay kasoo duushay dalka Barazil.
Diyaarada dhacday waxaa saarnaa rakaab gaaraya 81-qof oo isugu jira 72 rakaab ah iyo 7 kamid ahaa shaqaalaha Diyaarada, rakaabka diyaarada saarnaa waxaa ku jiray koox kubada cagta ciyaarta oo lagu magacaabo Chapecoense FC oo ka aas aasan dalka Brazil.
Kooxdan ka socoay dalka Brazil ee saarnaa diyaarada shilka gashay ayaa la qorsheenayay in beri la ciyaaraan Kooxda lagu magacaabo Atletico Nacional oo ka dhisan magaalada Medellin ee dalka Colombia.
Kooxaha gurmadka ayaa lasoo sheegayaa in ay heleen 9-qof oo nool balse qaba dhaawacyo, waxaana jira gurmadyo kale oo lagu baadi goobayo in la helo dad kale oo ka bad baaday shilkaasi, waxaana gurmadka la sameenayo caqabad ku ah sidii loo gaari lahaa halka ay diyaaradu ku dhacday oo ah dhul buuraley ah.
Wali lama shaacin qasaaraha rasiga ah ee ka dhashay shilkan diyaaradeed iyo waliba waxa dhaliyay , waxaana jira tuhuno la xariira in shilkan uu sabab u yahay roobab xoogan oo ka da’ayay magaalada Medellin oo aheed halka diyaarada ay kusii jeeday.
Previous PostDAAWO MUUQAAL dhameystiran: Waraysi Tarsan “Muqdisho waa la Kufsaday” Dagaalkii Itoobiya uu la galay, Doorashada dalka, iyo Wada-hadalka Maamulka S.LAND! Next PostArdayda Jaamacada SIMAD oo qalqal xoog leh galay kadib markii rag hubeysan ay gudaha u galeen Jaamacada!!